Maamulka G/Banaadir oo baajiyey muxaadaradii Sheekh Kenyaawi iyo Sheekha oo ka hadlay + Video - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Maamulka G/Banaadir oo baajiyey muxaadaradii Sheekh Kenyaawi iyo Sheekha oo ka hadlay + Video
Muqdisho (Caasimada Online) – Maamulka gobolka Banaadir ayaa codsaday in la baajiyo muxaadaro Sheekh Kenyaawi doonaayay in uu qabto Hoolka Sahal oo ku yaalla agagaarka Garoonka Aadan Cadde.
Mas’uuliyiinta gobolka Banaadir, waxa ay sheegeen in ay ka taxadarayaan Ammaanka dadka Shacabka ee goobta soo gaaraya.
Gudoomiye ku xigeenka dhanka Amniga iyo Siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa sheegay in uu codsaday baajinta Muxaadaradda, Maadaama dadkii la filayay kuwo ka badan ay soo xaadireen goobta oo isbuurasho ay ka dhacday.
“Dadweynaha kasoo qeybgalay muxaadarada Sheikh Kenyaawi waxaan u sheegaynaa in goobta muxaadarada loogu talgalay inay ka dhacdo iyo tirada dadka raba muxaadarada inay is qaadi waysay sidaas daraadeed anaggoo oo fiirinayna Amniga iyo nabadgalyada dadkaas waxaan Sheikha ka codsanay in la baajiyo muxaadarada iyo inaan goob ka weyn Hoolka Sahal aan ugu qaban doono shacabka Muxadaradiisa jecel” ayuu yiri Guddoomiye Tuulax.
Goobtii Galabta lagu qaban lahaa Muxaadarada ayaa waxaa buux dhaafiyay kumanaan ruux taas oo keentay in dadku isbuurtaan, waxaana warar aan helnay ay sheegayaan in rasaas ay fureen ciidamo ka tirsan dowladda ay ku dhaawacmeen saddex qof oo ka mid ahaa dadkii muxaadarada halkaasi u tegay.
Dhinaca kale Sheekh Kenyaawi ayaa arrintan ka hadlay, hoos ka daawo
Abiy unveils statue of Ethiopia's last emperor, Haile Selassie
Somalia's Oil Complete Insight, apparently Punland & Somaliland have the smallest in-land oil compared to other states.
Over Hundred soldiers defect from Somaliland region to join Lt General Caare's army
Garissa elders endorse re-election of Jubaland President Madobe